Gmail,Facebook Password တွေမေ့သွားပြီလားဗျ...(ပြန်ယူနည်းများ) - မောငျပေါကျ ( Maung Pauk )
Home Facebook နည်းပညာများ Gmail and Gtalk Gmail,Facebook Password တွေမေ့သွားပြီလားဗျ...(ပြန်ယူနည်းများ)
Gmail,Facebook Password တွေမေ့သွားပြီလားဗျ...(ပြန်ယူနည်းများ)
Thiha Htike at 6:31:00 AM Facebook နည်းပညာများ, Gmail and Gtalk,
င်္ဒအထဲမှာရေးသားချက်များဟာမပြည့်စုံသေးသလို လိုအပ်တာလေးတွေလည်းရှိသေးပါတယ် ။ မေးလ် password တွေကိုယူနည်းလေးတွေက mail တစ်ခုနဲ့တစ်ခု သိပ်မကွဲပြားပါဘူး မေးလ်တစ်ခုသာ ကောင်းကောင်းယူတတ်ရင်internet နဲ့ပတ်သတ်တဲ့စာလေးတွေသာဖတ်ဖူးရင်အခုပို့စ်ကို မျက်စိညောင်းခံပြီးမဖတ်ပါနဲ့ကျွန်တော်ဘာလို့ပြည့်စုံအောင်မရေးရသလဲဆိုတော့ Myanmar ပြည့်က connection အခြေအနေနဲ့ အလုပ်တစ်ဖက်နဲ့လေ့လာရတာလေးတွေရှိသေးတာနဲ့ ပြည့်စုံအောင်မတင်ပြရတာပါ ဒါပေမဲ့မသိသေးသောသူများအဖို့အတွက်တော့ဒီလို step လေးတွေအတိုင်း လုပ်တာပါလားဒါဆို mail address တစ်ခုပဲသိတဲ့သူတွေအတွက် လည်းနည်းလမ်းများစွာရှိပါတယ် အားရင်အားသလို တင်ပေးသွားပါမယ် ..
ဒီနည်းလည်းတင်ပေးထားပြီးသားပါ ကျွန်တော်ကိုဖုန်းဆက်ပြီးအကူညီတောင်းသူများလို့ပါ ကျွန်တော်က အရင်လို post တွေကို အများအစားကြီးမတင်တော့ပါဘူး နောက်ပိုင်း မိုးဆဲသလိုပဲ စိတ်လာတယ် စာလုံးပေါင်းမှားရင်ဆောတီးပါ အကြောင်းအမျိူးးမျိူးတွေမအားလပ်တဲ့ကြားမှ အကျိူးးဆောင်ပေးနေတာပါ ကျွန်တော် Apk မတင်တော့ပါဘူးကြာခဲ့ပါပြီ နှစ် ၂၀ လောက်ရှိပြီပေါ့ တိန် အရင်ဘ၀ရောက်သွားပြီပေါ့ :P စတာပါ ကျွန်တော်ကစာဖတ်သူတွေပျော်စေချင်တယ်ဖုန်းဆက်သွားမှမဟုတ်ဘူး ကိုယ့်ဘာသာလည်းလုပ်တတ်တယ်ပေါ့ အကယ်လို့သွားခဲ့ရင်တောင် ငါ့မှာ PC ဘာညာမရှိရင်ညည်းတို့ဆီလာလုပ်ခိုင်းရတာပေါ့တိန်ကျွန်တော့်ဆီဆိုရင် အရင်လိုအကောင့်တွေလာပြီး မဖွင့်ကြတော့ဘူးလေ ဘာလို့လဲဆိုတော့ သိကုန်ကြ့ပီပေါ့ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပါ အတွေ့အကြုံကြောင့်ပဲသင်တန်းတွေလည်းပေါါ်နေတာပေါ့ အကိုရောမဖွင့်ဘူးလားလို့မမေးပါဘူး ဖွင့်တော့ မှာပါ အိမ်နားက မုန့်ဟင်းခါးဆိုင်လေ ဟဲဟဲစတာပါ ကဲစကြစို့
၁။ ။ သင် Password ဝင်တာ အကြီမ်မှား၍ဝင်ပြီးနောက် Facebook က သင့်ကိုသတိပေးပါလိပ်မယ် သင်ရေးသွင်းတဲ့ Password မှားနေတယ်ဆိုတာကို။ အဲဒီနောက် သင့်ရဲ့ အီးမေး လိပ်စာနဲ့ Password ကိုဖေါ်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ ထို့နောက် Reset my password/ Forgot your password မှာ ကလစ်နှိပ်ပါ။
၂။ ။ Email mealink to reset my password ကိုရွေးပါ ထို့နောက် Continue မှာ လစ်နှိပ်ပါ။
၃။ ။ Code နံပါတ်တောင်းပါလိပ်မယ်။ Facebook မှသင့်ဆီကို အီးမေးပို့ပေးပါလိပ်မယ်။ သင်အီးမေးဖွင့်နေစဉ် Facebook စာမျက်နှာကို ဒီအတိုင်းထားပါ။
၄။ ။ သင့် Gmail ဆီသို့သွားပြီး Code နံပါတ်မှားကို ကော်ပီကူးယူပါ (Ctl - C ) ထို့နောက် Facebook စာမျက်နှာဆီကို ပြန်လာပြီး Code နံပါတ်များကို ဖြည့်ပါ။ ပြီးနောက် Continue မှာကလစ်နှိပ်ပါ။
၅။ ။ New Password နေရာမှာ သင့်ရဲ့ Password အသစ်ကိုဖြည့်ပါ ထို့နောက် သင့် Password အသစ်ကို Confirm Password မှာထပ်ထဲ့ပေးပါ။ Change Password/Continue မှာကလစ်နှိပ်ပါ။
၆။ ။ နောက်ဆုံးအဆင့်အနေနဲ့ သင့်လုပ်ထားသော သတင်းအချက်လက်အားလုံးကို Update လုပ်ပါ။ အကယ်၍သင်၏ Profile လုံခြုံမှုအားနည်းပါက Security Question ဖြစ်သင့်အကောင့်ကို ထိမ်းထားနိုင်ပါတယ်။ ပြီးနောက် Save Change မှာကလစ်နှိပ်ပါ။
Forgot your password ကို click ပါ။ ဒါမှမဟုတ် မေးလ်ကို Sign In လုပ်တဲ့နေရာရဲ့ အောက်က I cannot access my account ကို click လည်းရပါတယ်။
အောက်ပါအတိုင်း Username ကိုရိုက်ပြီး Submit ကို Click နှိပ်ပါ။
3. အောက်ပုံမှာ ပြထားသော စာတွေကို အကြီးဆိုအကြီး အသေးဆိုအသေးမှန်ကန်စွာရိုက်ပါ။ ပြီးရင် Continue ကို Click နှိပ်ပါ။
4. အောက်မှာတွေ့ရတာကတော့ မိမိအကောင့် create လုပ်ခဲ့စဉ်က ပေးခဲ့သော Question တွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ Answer my security question ၊ Getapassword reset link at my recovery email: နှင့် I no longer have access to these ရယ်ဆိုပြီးရှိပါတယ် ကို အဆင်ပြေမယ့်တစ်ခုကို check လုပ်ပြီး ဆက်သွားပါ။
ပထမတစ်ခုနဲ့ ဒုတိယတစ်ခု ထဲက နှစ်သက်ရာ တစ်ခုကို ရွေးပါ။ အောက်ဆုံးတစ်ခုက နဲနဲရှုပ်ပါတယ်။ ကဲ ပထမတစ်ခုကိုရွေးပြီဆိုပါစို အောက်မှာကြည့်လိုက်ပါ။ ကို အကောင့်လုပ်ခဲ့စဉ်က ပေးခဲ့တဲ့ Security question မှာပေးခဲ့တဲ့နာမည်တိုင်း စာလုံးအကြီးအသေး မှန်ကန်စွာနှင့် Space ခြားပြီးပေးခဲ့တယ်ဆို Space ပါခြားပေးပါ။ ဖြည့်ပြီးပြီဆို Continue ကို Click နှိပ်ပါ။
5. အောက်မှာအတိုင်း Password အသစ် ပြောင်းပေးဖို့ ချပေးပါလိမ့်မယ်။ New password နဲ့ Re-enter password မှာ တူတူ ထည့်ပြီး Reset password ကိုနှိပ်လိုက်ပါ။ New password ရိုက်တဲ့အခါ နောက်မှာ strong ဖြစ်တဲ့အထိ ရိုက်ပေးပါ။
6. အောက်မှတိုင်း Your password has been reset လို့ပေါ်လာပြီဆို account recovery လုပ်တာ အောင်မြင်ပါပြီ။ Sign out လုပ်ပြီး ပြန်ဝင်ကြည့်လိုက်ပါ။ ဒါက ပထမမေးခွန်းကိုရွေးပြီး လုပ်တာပါ။
ခု ဒုတိယမေးခွန်းကိုရွေးကြည့်ပါမယ်။ ဒုတိယမေးခွန်းကိုရွေးမယ်ဆိုရင် recovery email (or) Secondary email ကို ဖွင့်ပြီး gmail team က ပို့ပေးတဲ့ မေးလ်မှ password reset link ကို click နှိပ်ပြီး reset လုပ်ပေးရမှာဖြစ်လို့ recovery email (or) Secondary email ကိုကြိုဖွင့်ထားဖို့လိုပါလိမ့်မယ်။ ကဲဖွင့်ထားပြီးပြီဆို အောက်မှတိုင်း ဒုတိယမေးခွန်း ရှေ့မှာ check လုပ်ပြီး continue ကို click လုပ်လိုက်ပါ။
အောက်မှာအတိုင်းတွေ့ရပါလိမ့်မယ်။ အဲဒီလိုတွေ့ရပြီဆို ခုနာက ဖွင့်ထားတဲ့ secondary mail ထဲကို သွားစစ်ကြည့်လိုက်ပါ။
Google account recovery ဆိုပြီး မေးအသစ်တစ်စောင်ရောက်နေပါလိမ့်မယ်။ အဲဒီမေးလ်ကို click နှိပ်ပြီး ဖွင့်ကြည့်လိုက်ပါ။ အောက်မှာအတိုင်းတွေ့ရပါလိမ့်မယ်။ အဲဒီမှာ သူနှိပ်ခိုင်းတဲ့ အနီရောင်နဲ့ ၀ိုက်ပြထားတဲ့ Link ကို Click နှိပ်လိုက်ပါ။ နောက် page တစ်ခု ကျလာပြီး password reset လုပ်ခိုင်းပါလိမ့်မယ်။ ကိုယ်ထားချင်တဲ့ password ကိုထားပေးပြီး reset password ကိုနှိပ်လိုက်ရင် ရပါပြီ။
Facebook နည်းပညာများ, Gmail and Gtalk
Facebook နည်းပညာများ Gmail and Gtalk